विरामीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा डाक्टर पक्राउ « Emakalu Online
विरामीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा डाक्टर पक्राउ
१० मंसिर २०७६, मंगलबार
काठमाडौं । चेकजाँच गर्न आएकी विरामीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा चिकित्सक रोहितप्रसाद झाले हातमा हत्कडीमा लाग्नेवित्तिकै ठट्यौली शैलीमा भने ।
मेडिसिटी अस्पतालबाट नियन्त्रणमा लिएर जाउलाखेलस्थित हिरासतमा पुर्‍याएपछि भने झाको अनुहारको रंग बदलियो । जबरजस्ती करणी उद्योगमा पक्राउ परेका झालाई भेट्न पुगेकी श्रीमती उनलाई देख्ने बाहिर भक्कानिइन् । तब डा. झाले बलात्कार गर्न नखोजेको भन्दै प्रतिवाद गरे । यद्यपि उनी दोषी देखिने पर्याप्त आधार रहेको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
‘होल बढी चेक अप’ गर्न जाँदा‘
कीर्तिपुरकी ३० वर्षीया कमला (परिवर्तित नाम) समयसमयमा ‘होलबडी चेकअप’ गराउँथिन् ।
आइतबार नियमित परीक्षणकै लागि मेडिसिटी अस्पताल पुगेर डा. झालाई भेटिन् । अरु दिन डाक्टरको कोठामा छिर्ने वित्तिक एक जना महिला सहयोगी पनि सँगै हुन्थिन् । तर, आइतबार डा. झा एक्लै थिए ।
त्यसपछि उनले आफ्नो संवेदनशील अंगमा समेत हात पुर्‍याएको पीडितले बताएकी छन् । आफू चिच्याउँदै बाहिर निस्किइन् तर झाले भने ‘किसीको मत बताना १’ भनेको उनको बयान छ ।